Duullaanka Mosil oo maanta bilowday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Duullaanka Mosil oo maanta bilowday
Duullaanka Mosil oo maanta bilowday
Duulaan lagu doonayo in lagula wareego Magaalada Mosil ayaa ka bilayday dalka Ciraaq maanta oo Isniin ah, ka dib mudo ku dhow Hal sano oo loo diyaar goroobayay duulaankan ka dhanka ah Kooxda Daacish.
Magaalada Mosil ayaa ah magaalada Labaad ee ugu wayn dadka Ciraaq, waxaana tan iyo 2014 kii halkaasi ka talinaya Dowlada is-ku magacaawday Khilaafada Islaamka.
Ra’iisul wasaaraha Dalka Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi oo warbaahinta dowladda kala hadlay Ciraaqiyiinta ayaa maanta sheegay in ay tahay in laga guulayso wax uu ugu yeeray ” Aragagaxiso’.
QM ayaa sheegtay in Magaalada Mosil ay ku harsan yihiin dad shacab ah oo kor u dhaafaya Hal Milyeen iyo Bar, waxayna wel-wel ka muujisay waxa u dambayn doono dadkaasi shacabka ah ee ku hoos nool kooxda Daacish ee ka taliya dhul wayn oo ka tirsan dalalka Ciraaq iyo Suuriya.
Dowlada Maraykanka ayaa duulaanka Mosil qayb wayn ka ah , ayadoo la sheegay in ciidamo lug ah iyo kuwo dhanka cirka ah ay ku lug yeelan doonaan xuraynta Mosil.
“Waxaa farxad inoo ah inaan idin garab taaganahay”. “Waa howl gal taariikhi ah” ayuu bartiisa Tiwtter ka ku soo qoray Brett McGurk, oo ah wakiilka dowladaa Maraykanka ee Xulafada duulaanka ka dhanka ah Daacish.
Qiyaastii Hal milyeen oo ruux ayaa laga baqdin qabaa inay ka barakacaan dagaalka, sida lagu sheegay qiyaas ka soo baxday QM.
Sawirkan waxaa uu kuu muujinayaa sida dowladda Ciraaq, Maamulka Kurdiyiinta iyo Daacish ay u kala maamulaan Magaalooyinka waa wayn.
Dowladda Ciraaq ayaa maamusha qaybta guduudan ee sawirkan, Kurdiyinta ayaa maamula qaybta Jaalaha ah halka Daacish-na ay maamusho qaybta Madow .
General Haider Fadhil oo ka tirsan taliyaasha Maliteriga Ciraaq ayaa wakaaladda wararka AP, u sheegay in 25,000 oo askari oo isugu jira ciidamada dowladda, Malaashiyaad Shiico ah iyo kuwo Suni ah inay ka qayb qaadan doonaan duulanka maanta bilowday ee xuraynta Mosil.
Colaada ka jirta dalka Ciraaq ayaa waxaa ku barakacay in ka badan 3 Milyeen oo qof, halka 10 Milyeen-na ay u baahan yihiin gar-gaar deg deg ah, sida ay sheegay UNOCHA.
Previous articleBeesha caalamka oo walaacsan in hogaamiye kooxeedyadii hore lagu soo daro Aqalka Sare
Next articleDeg Deg: Hiir-shabelle oo hiir cad Madaxwayne doortay